I-Bulldozer Factory - China Bulldozer Manufacturers, abahlinzeki
I-Multi-Function Bulldozer SD7
I-SD7 Multi-function bulldozer ingumkhiqizo omusha wokumba nokushumeka ikhebula le-fiber fiber emhlabathini, elenzelwe futhi elenziwe yi-HBXG lenza le misebenzi elandelayo: ukubeka & ukufaka ikhebula elibonakalayo, ikhebula lensimbi, ikhebula likagesi, ukuvela kokumba, ukubeka, ukushumeka ngenqubo eyodwa, kakhulu ngcono ukusebenza kahle.
I-Bulldozer SD7N ehamba phambili yokushayela i-LGP
I-SD7LGP ngogandaganda yi-dozer yohlobo lwethrekhi engu-230 ene-sprocket ephakeme, idrayivu yokuhamba ngamandla, izilawuli ezimisiwe eziqinile nezima-hydraulic.
I-Bulldozer SD9N eshayela phezulu
I-bulldozer ye-SD9N iyi-dozer yohlobo lwethrekhi ene-sprocket ephakeme, i-hydraulic drive eqondile, izilawuli eziqinile ezimisiwe kanye nezilawuli ze-hydraulic. Ifakwe amandla ahlukanisa amandla we-hydraulic-mechanic type Torque converter, iplanethi, amandla kagesi nokudluliswa kokulawulwa kwesibindi okukodwa.
I-Bulldozer SD8N eshayela phezulu